फेरि पनि तिम्रै नशामा (कविता) — Motivate News
तिमी छौ अदृश्य ,
तर उ देखिरहेको छ तिमीलाई
बारम्बार टोलाएर ,
उ हेरिरहेको छ तिमीलाई
अनियंत्रित भएको छ, उ,
फेरि पनि तिम्रै नशामा ।
अनियंत्रित भएको छ उसको कलम,
बग्न चाहन्छ कता हो कता,
एक दिशाहिन यात्राको लागी ।
मौन छौ तिमी र मौन तिम्रो मुस्कान
पुलकित तर मौन तिम्रो मुहार
उ एकोहोरिएको छ,
भुतुक्कै भएको छ,
छेदविच्छेद भएको छ,
तिमिलाई हेर्ने प्रयास गर्छ, तर लजाएको छ ।
स्थिर रहन खोज्छ, तर लठ्ठीएको छ ।
वास्तविकतामा विश्वास गर्ने उ,
तिमीलाई सम्झिँदा, आज संसार बिर्सिएको छ ।
मन्दिरमा बसि झुठो गफ नगर्ने उ,
आज भट्टीमा बसि यथार्थ पोखेको छ।
अवस्य भ्रम, तिम्रो लागी,
तर उ तिम्रै यादमा मन्त्रमुग्ध छ ।
सहयोग मात्र नशाको,
उसले मन(मस्तिष्कमा तिम्रो प्रतिबिम्ब पाएको छ ।
र साथ पाएको छ, उसले कलमको,
अक्षरमा उतार्दैछन तिमीलाई,
नजिक आउने उसको कलमको प्रयास,
सायद उसको आफ्नै प्रयास ।
कलम, उसको घनिष्ठ मित्र,
तर तिम्रो नशाको पहिलो सिकार ॥॥
Posted in लेख रचना | Tagged कविता | Leaveareply
काठमाडौँ- केही दिनमै आईजीपीको पदमा आसिन हुन पुग्ने भनिएका पात्रहरु जुन देखिन्छन् त्यो हुदै होईनन् । बास्तबमा यिनीहरु को हुन त ? र पहिचानमा यिनीहरु बिच के फरक छन् त ? हेराईलाई पुष्ट्याई गर्ने उनीहरुको आधारहरु के के हुनत् त्यसको हिसाब किताब...
नयाँ आइजीपीका लागि सर्बेन्द्र, रमेश र धीरुबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा नयाँ आइजीपी बन्नका लागि दौडधूप सुरु भएको छ । आइजीपी प्रकाश अर्यालले आगामी चैत २९ गतेबाट अवकास पाउने भएपछि नयाँ आइजीपीका लागि डिआइजीहरुबीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ । आइजीपी अर्यालसँगै सबै एआईजीहरु उमेर हदका कारण विदा हुँदैछन् ।...
मायालु प्रेमीहरुलाई आँखा आँखा जुधेर नशामा मायाको केसदेखि लिएर पाउ सम्म रुपको बयान के गरूँ हजुरको नियालेर हेर्छु प्रतिविम्ब तिम्रो कोल्टे परेको ऐनामा बैँश फुलेर ढकमक्क भई फुली रहेछ हरेक अंग अंगमा आँखाको निलो पोखरीमा झल्कि रहेछ अलिकति लाज बयान गर्नु...